Accueil > Société > Toamasina : mitohy ny fandrobana avo lenta ao amin’ny seranan-tsambo
Variana loatra amin’ny adilahy pôlitika sy amin’ny fifanenjehana mpifaninana ho filoham-pirenena mihitsy angaha ny tomponandraikitra mivantana any ka manao ny ataony toa banga mihomehy ao anaty aizina tokoa ny mpanodina kontenera ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Araho ny tantara nitranga vao tsy ela.
Ny orinasa « Madagascar International Container Terminal Services Limited » fantatra koa amin’ny anarana hoe MICTSL dia orinasa manao ny asana « fournisseur de services en matière de containers au Grand Port » na mpanolotra asa manodidina ny fampiasana kontenera ao amin’ny seranan-tsambo ao Toamasina. Anisan’izany ny fanondranana entana ho any ivelany, mazava ho azy. Efa tamin’ny taona 2017 io MICTSL io no be mpanakiana nefa toa tsy nisy vokany daholo ny fitarainana natao hatramin’izao.
Ny Alakamisy 9 aogositra 2018 ary dia nisy tranga hafa indray no niseho tao amin’io orinasa MICTSL io. Inona moa ilay izy fa dia resaka kontenera nisy lavanila niova ho zavatra hafa rehefa tonga tany amin’ny tompon’entana. Fa ahoana marina ny fizotrany ? Toa ny mahazatra izay hitan’izay manao azy fa tsy ratsy ny fanohizana azy dia mandeha, amin’izao fotoana hanoratanay izao, ny tsindry bokotra sy ny tsindrio fa lavo mihatra amin’ireo mpiasa madinika hanilihina ilay raharaha any amin’izy ireo. Inona moa io raharaha io.
Resaka fanodinkodinana fanondranana lavanila mitenti-bidy any aminy 50 miliara iraimbilanja (fmg) any ho any, tompoko, ka tomponandraikitra ambony maro ao amin’ny MICTSL no voarohirohy amin’izany. Inona ny zava-nisy anefa ? Rehefa vita ireo fanadihadiana (« enquêtes ») maro nataon’ny mpitandro filaminana dia raikitra fa hakarina any amin’ny fampanoavana ny raharaha ny alarobia 8 aogositra 2018. Inona anefa no niseho tampoka ? Nisy baiko avy any ambony any nanafoana izany fampiakarana any amin’ny fampanoavana ireo trondro vaventy voarohirohy ary nivadika ny rasa ka dia naverina soa aman-tsara anivon’ny pôlisy ekonomika indray no nantsoina ireo voarohirohy, ny Alakamisy 9 aogositra 2018 voalaza etsy ambony. Ny dikany dia tsy nisy… dikany ireo fanadihadiana maro nataon’ny mpitandro filaminana teo aloha. Misy mena ambonin’ny mena ao, hoy ingahy minisitra teo aloha Paul Rabary izay…
Ny mahavariana anefa dia toa lasa naka « congé » tampoka daholo ry zalahy, ka anisan’izany Andriamatoa Rivolalaina Rakotomahenina izay Talen’ny fandraharahana na « directeur des opérations » ao amin’ny MICTSL. Ireto manaraka ireto misy ampahan’ny fisehoan’ilay tranga toa feno « fahagagana » tokoa. Marihina fa tamin’ny 27 sy 28 marsa 2018 no niseho ilay tranga. Raha ny fantatra sy hita maso dia niditra soa aman-tsara teo amin’ny vavahadin’ny MICTSL ny kontenera iray voalaza fa nitondra ny lavanila. Taoriana anefa dia ireny kaontenera roa mitovy laharana no nivoaka avy ! Ity manaraka ity ilay laharana nisy teo amin’ireo kontenera roa ireo : TGHU076731/9 TGHU184586/4. Ka ny iray nisy fantaka (« bambou ») sy voan-drofia, raha feno ilay lavanila mitenti-bidy 50 miliara kosa ilay faharoa. Teo ambony fiara lehibe (« camions ») roa kosa no nahitana ireo kontenera mitovy laharana ireo tao amin’ny MICTSL, ka ireto avy ny laharany : 7426 AD sy 9477 TBD. Mazava fa tao no nisehoan’ny fahagagana tsy manam-paharoa fa mahazatra kanefa tsy mety voasazy mihitsy hatreto.
Ahoana ny tohiny hoy ianareo ? Rehefa tonga tany ampitan-dranomasina tany amin’ilay tompon’ny lavanila ny konterena nandrasany dia niseho ny ataon’ny tanora hoe « magie magie » satria dia voan-drofia sy fantaka no nameno ilay kontenera kanefa lavanila mitentina 50 miliara no nafarany avy aty Madagasikara ! Mipetraka ho azy ny fanontaniana : nankaiza ilay kontenera nisy lavanila ? Ny mbola mahavariana kokoa dia tsy indray na indroa no nisy tranga toa io ary nahavoarohiroy foana tomponandraikitra ambony ao amin’ny MICTSL fa votsotra hatrany ry zalahy e ! Fa mpiasa madinika hatrany kosa no lasa sorona. Mila tsiahivina ve ny raharaha Dynatec ? Tamin’izay laharana sy famantarana (« marque ») kontenera mihitsy no nosandohana kanefa dia very anjavony ilay raharaha hatramin’izao.
Tao koa ilay kontenera nisy fitaovana ho an’ny hôpitaly manara-penitra. Rehefa nivoaka tao amin’io MICTSL io kontenera io dia vato kely sy hazo fisaka no nameno azy. Tsy resahina eto intsony moa ny entan’ny « Chambre de commerce». Mipetraka hatrany izany ny fanontaniana : misy fanjakana ve eto Madagasikara ? Tany tan-dalàna tokoa ve ity Nosy ity ? Ny azo amehezana ny zava-misy aloha dia toa tsy matimanota mihitsy ireto tompon’andraikitra ambony ao amin’io MICTSL io, izay marihina fa orinasa tsy miankina («société privée ») izay toa manjaka tokana tokoa ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ao. Very fanahy mbola velona daholo ny mpanondrana sy ny mpanafatra entana ary ireo « transitaires » izay mitondra faisana tokoa. Hatreto izany dia miha-potika andro aman’alina ny fidiram-bolam-panjakana ao amin’io seranan-tsambo io ankehitriny.
Misy hilaza indray fa zavatra noforonina daholo izany raharaha lavanila mitenti-bidy 50 miliara iraimbilanja izany. Alefaso aty aminay ary ny porofo fa mpamorona izahay eto amin’ny « La Gazette de la Grande île » e ! Marihina fa io MICTSL io dia itony atao hoe « société en concession ». Izany hoe ny 16 jona 2005 dia nanao sonia fifanarahana tamin’ny SPAT (« Société de gestion du port autonome de Toamasina ») fa hiasa mandritra ny 20 taona ao amin’io seranan-tsambon’i Toamasina io izy. Izany hoe hatramin’ny taona 2025 ! Tsy efa manakaiky ny Vina fisandratana 2030 ve izany ? Ho ela velona mandra-maty ary e !